विद्युतीय धरापमा भाले हात्ती झ्याप्पै - समृद्ध नेपाल
विद्युतीय धरापमा भाले हात्ती झ्याप्पै
भद्रपुर -गाउँलेले थापेको विद्युतीय धरापमा परी एउटा छावा जङ्गली हात्तीको ज्यान गएको छ । झापाको हल्दीबारी ३ स्थित रनकाली सामुदायिक वनभित्र करेन्ट लागेर भाले हात्तीको ज्यान गएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयको नजिकै छावा जङ्गली हात्ती मृत अवस्थामा फेला परेको जलथल सव–डिभिजन कार्यालयका प्रमुख जीवन पाठकले बताए । अन्दाजी तीन वर्षको छावा भाले हात्तीको सुँडले करेन्ट प्रवाह भएको तार छोए पछि र पानीको दहपनि भएकोले मृत्यु भएको पाठकको भनाइ छ । तार सुँडमा बेरिएको उनले बताए । मृतक हात्तीको लम्बाइ १६ फिट ६ इन्च र उचाइ ८ फिट ४ इन्च रहेको उनले बताए ।
घटना शुक्रबार वेलुका भए पनि स्थानीयले शनिबार विहान मात्र थाहा पाएका थिए । घटनास्थलमा स्थानीयको भीडसँगै हात्तीलाई पूजा गर्दै फुल तथा पैसा चढाएका थिए । घटनापछि जनप्रतिनिधिको रोहवरमा मुचुल्का तयारी गरी पशु चिकित्सकले पोस्टमार्टम गरेर सोही जङ्गमा खाल्डो खनेर पूरिएको उनले बताए ।
बसपार्कमा ग्राहक खोज्छु अरु काम दिएपनि गर्दिन भिडियो !
एउटा छोरीको अनुरोध मेरो ममिलाइ बचाइदिनुहोस् उहाँ बिना हामी कस्को साहाराले बाँच्ने ?
ठमेलमा एक युवती बलात्कृत, प्रहरीको फन्दामा पाँच जना
उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीमाथि कारवाही होस्: कोमल वली
दुई तिहाई सरकार ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाएजस्तै’ भयो: जनार्दन शर्मा
जिबनमा सफलता चुम्नको लागि अपनाउनुस् यी ७ टिप्स !
खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन भन्ने झैँ केटाकेटीहरुसँग ४ कक्षामा पढ्छीन् गोमा पराजुली, !
अनौठो घटना ! १० वर्षका बालकले १३ वर्षकी बालिकालाई बनाए गर्भवती
पाकिस्तानमा बम प्रहार गरे लगत्तै भारत–पाकिस्तानबीच तनाव, नेपालमा उच्च सुरक्षा सर्तकता !
पानी छोएकोमा दलितमाथि कुटपिट
प्रचण्डले भावुक हुँदै भने – प्रकाश पनि देश र पार्टीलाई सहयोग गर्दागर्दै गयो
इटहरी १५ का वडाअध्यक्ष जुवाको खालबाट पक्राउ